बुधबार, अशोज २३, २०७०
‘तिमी त मेरो ‘हर्ट’ पो त !’ फेसबुकमा फ्रेण्ड रिक्वेष्टसँगै म्यासेज गरेको त्यो दिनको साँझपख उनले रिप्लाई गरिन्– ‘छ्या कत्ति नचाहिँदो गफ गर्छौं है तिमी, कसरी भए म तिम्रो हर्ट, तिम्रो हर्ट त तिमीसँगै छ नि ।’
लाग्थ्यो नै त्यस्तै, मेरो आधा मुटु त्यतै छ । उनीविना संसार अधुरो छ । उनीविना संसार रमाइलो हुने छैन । जीवनको गोरेटोमा पाइला चाल्न गाह्रो छ । मलाई त्यस्तै लागिरहन्थ्यो । प्लस टु सकाएर व्याचलर क्लास लिन पुगेको मेरो नजर पहिलो पटक उनैमा ठोक्किएको थियो । ‘फस्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन’ त्यस्तै भयो । उनीबाहेक कसैमा गएनन् यी नजर । खोजेनन् यी आँखाले कोही कतै ।
उनीसँग भएको भेटको पहिलो दिन क्याम्पसबाहिर हेल्लो हाय भयो । म क्याम्पसतिर छिरें, उनी आफ्ना साथीहरूसँग केही मिनेट ढिला गरी पसिन् । अर्को दिन पनि त्यहीं भेटेँ, झन् अर्कोे दिन पनि उही ठाउँ । अघिपछि भएर भए पनि सँगसँगै क्याम्पस छिथ्र्यौं हामी । ‘सधैंजसो क्याम्पस गेटमा आएर कुर्ने गरेको मलाई त हैन नि !’ जिस्क्याउन मन लाग्थ्यो तर कहाँ सक्नु मनका ती तरङ्ग मनमै रहन्थे । भेट भएको हप्ता नहँुदै उनलाई केही भन्न मन लाग्यो । भन्न नपाउँदै मुटु ढक्क फुल्थ्यो तर पनि डराएन यो मन, डराउने भए उनीमा यी नजर ठोक्किँदा डराउनुपर्ने । नजिकबाट हलुकासँग मन बोल्यो– ‘सुन न, तिमीसँग सानो काम थियो, एक मिनेट भेट्न है ।’ म पनि अचम्मको मान्छे, खै किन भनें उनलाई त्यस्तो । सधैं भेट हुने, बोलचाल हुने मान्छेलाई किन एक मिनेट भेट्न आग्रह ग¥या थें होला ।
‘हाय’ भन्दा ‘हेल्लो’ फर्काउने नत्र नबोल्ने उनको बानी थियो । सानी सानी थिइन्, अरूभदा ‘एक्स्ट्रा’ थिइन्, मसँग ठ्याक्कै सुट हुने खालकी । त्यही भएर मलाई मन पथ्र्यो । ठिकै पढ्न जानेकी उनी थोरै बोल्थिन् तर विचार गरेर बोल्दिथन्, मैले नराम्रा बानी केही भेटाउन सकेको थिइन, शायद अरूलाई पनि भेटाउन मुस्किल पथ्र्यो । उनी थिइन् नै त्यस्तै । जो पायो त्यसैसँग गफ्फिएर बस्दैनथिन् उनी । एकैछिन भेट्न पनि गाह्रो मान्ने उनी नजिकबाट नबोलाउँदासम्म ध्यान दिन्नथिन्, आफैमा मग्न हुन्थिन् । त्यही बानी मलाई मन पथ्र्यो ।
क्याम्पस कति खेर पुगूँ झैं हुन्थ्यो, क्याम्पस पुग्नेबित्तिकै कति वेला हाफ टाइम होलाझैं हुन्थ्यो, त्यसपछि लाग्थ्यो कति वेला विदा होलाझैं । विदा भएपछि कति वेला उनलाई देखूँ झैं हुन्थ्यो फेरि । यस्तो क्रम चलिरह्यो । एकप्रकारको बानी नै परिसकेको थियो एकोहोरो माया गर्ने । उनी रिसाए पनि म कहिल्यै रिसाइन । उनी झर्किएर बोले पनि म कहिल्यै त्यसरी त्यसरी बोलिन । उनले नराम्रो दृष्टिले हेरे पनि मैले कहिल्यै त्यसरी हेरिन । उनले जसरी जे गरे पनि मेरो दृष्टि, हेराइ, प्रेम, स्नेह सकारात्मक थियो । सँगै बसेर एकदिन चिसो खाइयो, कहिल्यै चाउमिन, मःमः खाइएन ।
साथीहरूले उनको सही बयान गरिदिँदा मन शीतल हुन्थ्यो, नभएर पनि आफ्नै भएको आभास हुन्थ्यो । उनका हरेक प्रगतिमा आफ्नो प्रगति भएको सोच जाग्थ्यो । मैले मन पराउने भन्ने कुरा थाहा भएकाले नै उनका साथीहरू मलाई देख्दा मुस्कुराउँथे । चिमोट्थे उनलाई । तर उनी नराम्रोसँग रिसाउँथिन् मसँग, आफ्ना साथीहरूसँग । उनलाई साथीहरूले जिस्काउने, मलाई मनले जिस्काइरहने । न मेरै हो भनेर पक्का भएको त्यो अवस्था न अरूकी हुन् भनेर कुनै प्रमाण देखियो, थाहा पाइयो । यसै भएन, उसै भएन । क्याम्पसमा एउटा कार्यक्रम हुदैथियो । उनका साथीहरूलाई एक मिनेट भेट्न भनिदिनु भनेर खबर पठाएँ । धेरै टाढा पुगिएन । क्याम्पसको गेट नजिकै साईडमा उनी आइन । वोलाउन त वोलाए तर मलाई भेट हुन जान साह्रै गाह्रो भयो । खै मननै त्यस्तै हुँदोरहेछ, त्यो सेन्सले भेट्न पुग्दा । चाँडो भेट्न आग्रह गरेको म नै ढिला पुगेँ । पुग्नेवित्तिकै हात काप्यो, भन्न साह्रै डराए, डरायो यो मन पनि । तर पनि भने, –‘रियल्ली भन न, क्यान आई वि योर हर्टली फ्रेण्ड ?, उनले उत्तर दिइन– ‘पिलिज मलाई त्यस्तो नसोच । मैले भने, किन ?, रिसाउँदै उनले फेरि भनिन्– ‘त्यस्ती खालकी मान्छे नै हैन, मन पनि पर्दैन ।’ आखिर हौ कस्ती, मैले अलि अलि हाँस्दै भने, । उनले चाडै उत्तर दिइन, हेर मलाई ढिला हुन्छ, सर क्लासमा पस्ने वेला हुनै थाल्यो, के भन्न छ भन चाँडै । यही कुरा हो, मैले भनें । हिड्न थालेकी उनी र साईडमा मुस्कुराइरहेकी उनकी साथीलाई मैले एक मिनेट भन्दै रोकेँ, अनि हल्का हल्का उनीहरूको हिंडाइसँग तालमेल गराउँदै मैले उनीसँग मोवाइल नम्वर मागेँ । ‘साच्चिकै मेरो मोवाइल विग्रिएर वनाउन दिएकी छु, वनेपछि दिन्छु ल’, थोरै थोरै हाँस्दै उनले भनिन, आफ्नी साथीलाई पनि नभएको कुरा गर्न लगाइन् । तर मैले उनको मोवाइल चुज पाइन्टमा देखिसकेको थिएँ । देख्नेवित्तिकै त्यो के हो त प्रश्न गरिहालें, –‘पिलिज फोन नम्वर त देउ ।’ हल्का अनुहारमा निरासा छाउँदै मलाई नम्वर दिइन् ।
कलम थिएन साथमा, मेरो फोनमा रातभर म्यासेज र मिसकल गर्दा चार्ज नै थिएन । उनले दिएको नम्बर मनमनै दोहो¥याएँ । उनीभन्दा चाडो क्लासमा पुगें । क्लासमा पुग्नेवित्तिकै कपिको लाष्ट पेजमा उनको नम्वर लेखिहालें । नम्वर पाएरै उनलाई पाए झै भयो । क्याम्पसदेखि डेरा पुग्नेवित्तिकै अफिस पुगें । अफिसबाट फर्किनेवित्तिकै त्यही दिन राती उनको नम्वर टिपेकै कपिमा एउटा कविता पनि लेखियो । आफैले लेखेको कविता पढ्दा आ“खाबाट आ“सु झ¥यो । त्यही कविता अर्कोदिन रेकर्ड गराएँ । न देउ पीडा…। सबैका मोबाइलमा रिङटोन बज्न थालें । प्रेम कविता पहिलो पटक लेखेको थिएँ । उनको नाउ“मा त्यसवेला कवि पो पनि भएछु ।
उनीसँग भेट्न मन हुन्थ्यो । भेटमा सवै कुरा पोखु पोखु हुन्थ्यो । तर अधिकांश समय टाढैदेखि हेराहेर मात्रै हुन्थ्यो । कुनै पनि केटीहरूसँग बोल्न र जिस्कन नडराउने म उनीसँग चाहिँ हरेक भेटमा किन किन डर लागे जस्तो हुन्थ्यो । फोन कमै हुन्थ्यो । हुन्थ्यो त मात्रै म्यासेज र मिसकल मात्रै । सपनीमा उनलाई नदेखेको रात थिएन । म्यासेज गर्दा नै १ सय रूपैयाँ सकिएको पत्तो हुँदैन थियो । तर जति म्यासेज पठाए पनि धौधौमा एउटा म्यासेज रिप्लाई आउथ्यो त्यही पनि एक शब्दको । ‘नाई, नो, नट, ह्वाई, कस्ले भनेको,?’ यस्तै यस्तै । मिसकल जति गरेपनि फर्किदैनथियो ।
वेला वेलामा कसम खान्थे, अनि वाचा पनि यस्ती केटीका पछाडि कति धाइरहनु ?, तर त्यो वाचा र कसम केही समयमै तोडिन्थ्यो । किनकी भित्रैदेखि मन पराएको मान्छेलाई विर्सिन्छु भनेर कसरी सकिदोहो । मुटुको एउटा कुनामा थाहा नै नदिइ सजिएको मान्छेलाई हटाउन पनि धौ–धौ पर्नेरहेछ । एकोहोरो यो मायाको महत्व र पीडा नवुझ्ने उनको त्यो वानीदेखि चाहिँ मलाई पछिल्ला दिनहरूमा किन किन दुःखी बनाइरहेको थियो । आफैलाई प्रश्न गर्थे, ‘त जस्तो प्रोफेस्नल मान्छे जावी एउटी केटीका पछाडि कति धाइरहन्छस् ?’ तर मैले भुल्ने प्रयास गरेपनि यो मनले भुल्न सकेन । सयौं पटक डिलिट उनको नम्वर सेभ हुन्थ्यो आफै । धेरै पटक फेसवुक फ्रेण्डवाट हटाइएकी उनी कता कतावाट साथी बन्थिन । चाहन्थिनन् उनी मसँग आफ्नो नाता गास्न तर फ्रेण्ड रिक्वेष्ट हरेक पटक एसेप्ट गर्थिन । बिर्सन खोज्दा कति पटक सम्झे“ उसलाई । उसको यादको डुबान र उडानमा आफैंलाई नि बिर्सिए“ कति पटक । आफैलाई हराएर सम्झन्थे उनलाई । लभलेटर कहिल्यै लेखिन । लेखे त म्यासेज, पठाए फेसवुक र फोनको भरमा ।
मायानै नभएको उनको मरुभूमी मनमा अब कसरी पलाउँछ होला भन्ने लाग्थ्यो वेलावेलामा । आफू विजी होइने भएकाले न त उनीहरूको
घुमघाम कार्यक्रममा समय दिन पाइन्थयो, नत उनीहरूको पिकनिक कार्यक्रममा नै । तर डर लाग्थ्यो । म नगएपछि उनलाई केही समस्या प¥र्यो कि । कसैसँग हिंडेकी छ कि आदी इत्यादी । केही पटक त्यसरी उनीहरूको पिकनिक तथा टुर कार्यक्रममा खुसुक्क पुगें पनि । साथीहरूले भन्थे हामीहरू छौं किन डराउँछस् यार । ओके, केयर गर है भन्दै फर्किन्थे साथीहरूलाई जिम्मा लगाएर । उनको खुसी लुट्न मन लाग्थेन । उनी पिकनकिमा नाँचिरहेको देख्दा वरैबाट हेरेर बस्न मन लाग्थ्यो । उनीसँगै नाँच्ने मेरा साथीहरूसँग मलाई दाज्थें । हराउँथे कल्पनामा, एक्कासी गीत सकिदा झल्याम्स होसमा आउँथें । लुम्बिनीका रुख र मनोरम ठाउँमा आफ्ना साथीहरूसँग मज्जा लिइरहेकी उनलाई डिष्टप गर्न मन पनि भएन । त्यही भएर त साथीहरूलाई ख्याल गर्न भनेर फर्किन्थे । वाईकमा सवार म कति वेला एकडेढ घण्टाको व्यस्त सडक छिचोल्दै यो ठाउँमा आएको हुन्थें पत्तो हुँदैनथियो । उनकै तिनै खुसी भएका क्षणहरू सम्झदैमा मलाई खुसी लाग्थ्यो ।
उनी दुःखी भएको वेला मेरो मनमा पनि नरमाइलो फिलिङ हुन्थ्यो । ‘तिमी कहा“ हरायौ ? किन बोल्दैनौ ? ए, छुच्ची यस्तै यस्तै म्यासेजबाट पठाउँथें । उनले पनि कहिलेकाँही, त्यस्तै रमाइला म्यासेज पठाउँथिन । तिम्रो वुद्धि छैन, वुद्धि आएपछि आफै थाहा पाउनेछांै माया के हो भनेर । अरे, मेरो वुद्धि छैन रे । हैन हैन, ठट्टा गरेर भनेको भन्दै फेरी भन्थिन्, –‘तिमी हरेक कुराबाट प्रफेक्ट छांै, राम्रो काम गर्दैछौ यस्तै राम्रो गर्दै जाउँ, तर लभको कुरा सोच्दैनसोच ।’ दुःख लाग्थ्यो हरेक म्यासेजमा यस्तै, हरेक फोनका संवादमा यस्तै, हरेक भेटमा यस्तै । नानु, काली, छुच्ची जस्ता मायाका संवादहरू उनलाई रुच्दैनथियो । त्यही भएरै म पनि नामलेनै बोलाउँथें ।
जहिले पनि मलाई आफ्नो ड्रिम नसोच्न आग्रह गर्थिन । तर म कसरी सक्थें, सपनाकी ड्रिम भइसकेकी थिइन विपनाकी वनाउन तल्लीन थिएँ । म पनि कस्तो मान्छे सानो खुसीमा ज्यादै खुसी हुने, सानो दुःखमा अत्तालिने । यो मेरो लाष्ट म्यासेज र संवाद हो है भन्दै कैयांै पटक कल गरें, म्यासेज गरें । विर्सिएर पनि उनलाई भुल्दैनथियो यो मन । अनुभूतिको रंगिन छाँया थिइन् उनी । अनुभूति अनुभूतिले मात्रै बनेको त्यही छाँयाको मायामा म फसेको थिएँ ननिस्कने तरिकाले । पत्तो नै नपाइकन । एकोहोरो माया गर्दा पनि कति–कति वेला मज्जा आउँदोरहेछ । उनले उत्तर पनि त्यस्तै खालका दिइन्थिन । मैले तिमीलाई माँया पनि गर्दिन, घृणा पनि । कहिलेकाँही भेट हुने त्यही पनि वाई नभनीकनै छुट्टिन्थ्यौ हामी । त्यसैले रमाइलो थिएन म, मेरो यात्रा र मेरो भविष्य । तर सधैं यस्तै होइन । कहिलेकाही“ कताकता अनौठो पीडा हुन्थ्यो, छालाभित्रको कमलो मासु घोचि“दाखेरिको जस्तो । छातीभित्र कतै दुख्थ्यो तर कहा“निर, मलाई थाहा हुन्थेन ।
क्याम्पस विदा, कामको कम व्यस्तता । त्यहीदिन एउटा क्याफे अगाडि । टिउसन क्लास सकेर रुमतिर फर्किदै थिइन उनी । ‘ओए,’ म चिच्याएँ, ‘पख न ।’ उनी फर्किइन तर रोकिइनन् । नरोकिएपछि म फेरी जहाँको तहि बसें । साथीसँग हिंडेकी उनी केही पर हल्का हिंडेको र पर्खिएजस्तै लाग्यो । तर मलाई पत्यारै लागेन । एकैछिनमा उनको फोन आयो, किन होर, आउने हैन, किन रुक्न भनेको । एक मिनेट म आइहालें, फोन काटेर हिंडिहालें उनलाई भेट्न । नजिक नपुग्दै अली वरैवाटै, –‘टिउसन पढेर आयांै, कस्तो छ पढाई, के छ कसो छ, यस्तै यस्तै ।’ जति मैले तारिफ गर्थे उनले कुराहरूलाई उडाउँथिन् । ठट्टा गर्थिन् । मैले मेरो मनको कुरा शान्त भएर गर्न खोज्थें उनले एकैचोटी खास के हो, किन भेट्न वोलाएको भन्ने जस्ता प्रश्न तेर्साउँथिन् । त्यही भएर नै एकपटक क्याम्पसको गेटमा वाहेक प्रत्यक्ष रूपमा कहिल्यै राम्रोसँग कुरा भएन ।
म क्याम्पसभित्र पस्दा पहिलो पटक आ“खा उनैलाई खोज्थें । क्याम्पसभित्र र हाफ टाइममा उनलाई देखेन भने क्याम्पस वाहिरको होटलमा पुग्थें । एक्लै जान झ्याउ लागेर साथीहरूलाई लैजान्थें । साथीलाई वाहिर लगेको भाडा लाग्थ्यो । यसको मतलव नास्ता खुलाउनुपर्ने । हेहेहे…। कहिलेकाँही नास्ता खुलाएर के नै जान्थ्यो र भन्ने हुन्थ्यो । किनकी उनी वाहिर आएको र भित्र पसेको त्यो होटलबाट सबै देखिन्थ्यो । त्यहा“बाट पनि उनलाई देखेन भने खै कुन्नी कुन ठाउ“मा दुख्थ्यो भित्र–भित्र । उनलाई देखेपछि वा देखेंभने यी आँखा उनी गएतिरै दौडिन्थे । मेरो मन त उनैसँग हिंड्थ्यो । एकदिन उनलाई देखेन भने नरमाइलो अनुभूति हुन्थ्यो । यो क्रम दोहोरिएको महिनौ भयो । साथीहरूले भन्न थाले उनको खुसी किन लुट्न खोज्दैछस् । उ मेरो लाइफवाट गई यार, साथीहरूलाई उत्तर दिंदा हैरान हुन्थें । तर आफ्नो जात जनाइहाल्थें केही कुरा आयो भने उसैलाई उदाहरण बनाएर कुरा गरिहाल्थें ।
सधै–सधै अनि हरेक पटक । उनले मलाई भुल्न आग्रह गर्दै गइन् । नसक्ने यो मनले नाटक भएपनि रच्न थाल्यो ओके, अब त भुल्नुपर्छ । झण्डै ३ वर्ष नै भयो अब कति धाइरहनु ? एकोहोरो माँया गर्दापनि वाक्कै हुन थाल्यो यो मन । यो मनमा निरासा र उनलाई पाउने आश मर्दै गयो । यिनै कारण हुन् एक्लैएक्लै बस्न थालेको । यिनै कारणले हो, कलेज जाने मन फेरिन थालेको । विछोड र सेन्टी खालका गीत सुन्न र गुनगुनाउन मन लागेको पनि यिनै कारणले हो । अरू दिन विहानै क्याम्पसमा पुगेर कफि पिउने वानी विस्तारै परिवर्तन हँुदै गयो । यिनै कारणले हो । न कसैको मतलव, न कसैप्रति जिज्ञासा, न कसैप्रति उत्सुकता, आफ्नो बाटो हिंड्यो, आफ्नो काम ग¥र्यो, यिनै कारणले । आफ्नोलाई पराई देख्न थालेको पनि यिनै कारणले हो । भुल्न थाले उनलाई, यो मनमा केही बचेको आश पनि मर्न थाल्यो । कहिल्यै नौलो नलागेको संसार पनि रहस्यमय लाग्न थाल्यो । एक्लैएक्लै रुन र हाँस्न मन लाग्यो, ऐना अगाडि घन्टौं बस्ने बानी लाग्यो । मनको ढुकढुकीमा झन पछि झन धड्किन थाल्यो । मेरो मन भरिलो भयो भावनाले । जोडस“ग धड्किन थाल्यो मुटु । तर मैले उसलाई हेट गर्न कसरी सक्थेर । सधै आफ्नोपन लाग्ने ती ठाउँहरू । उ हिंड्ने बाटो । उ बस्ने पथ । जताततै हर आकृति मलाई बिरानो लाग्न थाल्यो तिनै कारणले ।
कारण उनीसँग पनि छन् । माँया उनलाई पनि लाग्दोहो । कसैलाई फ्रिडम, कसैलाई परतन्त्र अथवा अधिनता । त्यस्तै भयो होला उनलाई पनि । बाध्य पारेर उनलाई आफ्नो पकडमा ल्याउनु पनि एक प्रकारको मुर्खता हो । मेरो इक्ष्यालाई मात्रै उसले बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै माया नहोला । उसको इक्ष्यालाई बुझेर उसले चाहेको पु¥याइदिनु त्यो भन्दा ठूलो माँया होला ।
विचरा, सोझी थिइन् तर बिन्दास थिइन् । न कसैको टेन्सन न कसैको बोझ । ‘फेसबुकका फोटो र स्टाटस तथा उनको क्याम्पस लाइफले संकेत गर्थे उनी चरी झैं स्वतन्त्र छन् । नाच्दै बादलुभित्रभित्रै हराउँथिइन्, रमाउँथिन् । उनका तिनै खुसीमा रमाउने वाचासहित हिजोआज उनलाई मनका तरङ्गहरूले विरानो ठान्न थाल्यॉछ । अभागी आत्मा निराश बन्न पुग्यो । नचाहेरै भएपनि एकोहोरो माँया तोड्न पुगें । यो मान्छेले मनका दैलाहरूमा आउने र छुनमुनाउने प्रतिविम्वहरूलाई पाखा लगाउन थाल्यो ।
(मैले लेख्दै गरेको पुस्तक ‘नजोडीदै टुटेको प्रेम’ मा समावेस केही अशं । पुस्तक चाडैनै वजारमा ल्याउने गरि लेख्दैछु ।)
बुटवलमा प्रदेशस्तरीय गजल प्रतियोगिता सम्पन्न
छन्द बचाउ अभियान : संसार रहेसम्म छन्द मर्दैन
रुपन्देहीको देवदहमा चौधरीको एकल कविता वाचन,सुनाए डेढ दर्जन कविता
बुटवलमा प्रदेशस्तरीय गजल प्रतियोगिता असाेज ५ मा